Maxaa kala socotaa 7 Shakhsi oo uu midkood noqon doono Ra'isulwasaaraha xiga ee dalka Itoobiya? - Caasimada Online
Home Warar Maxaa kala socotaa 7 Shakhsi oo uu midkood noqon doono Ra’isulwasaaraha xiga...
Maxaa kala socotaa 7 Shakhsi oo uu midkood noqon doono Ra’isulwasaaraha xiga ee dalka Itoobiya?
Adis Ababa (Caasimadda Online) – Isbahaysiga talada haya ee Itoobiya ayaa la filayaa in ay goor dhow kulmaan si ay u doortaan hogaamiyohooda xiga. Qofkaas oo noqon doona ra’isalwasaraha xiga ee wadanka. Qofka la doorta ayaa mas’uul adag qaadi doona iyadoo wadanka ay ka jiraan mudaaharaadyo rabshada wadata.